ललिता निवास जग्गा : सबैविरुद्ध मुद्दा लाग्यो, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन चलेन मुद्दा ? - Himali Patrika
ललिता निवास जग्गा : सबैविरुद्ध मुद्दा लाग्यो, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन चलेन मुद्दा ?
हिमाली पत्रिका २२ माघ २०७६, 2:11 pm
जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन्। मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसीर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे।
एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो। ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन।
यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो। तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ।
त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते र भक्तपुरमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो। संलग्न भएको भनी तिलककुमारीलाई २०६८ साल पुस १८ गते दुई वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना सुनाइयो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि फैसला सदर गर्‍यो। ‘सञ्चार मन्त्रीज्यूले महासचिव पौडेललाई झुक्याइयो, बास्तवमा उहाँ पीडित हो, कारबाही हैन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के नेपालमा तिलककुमारी र विष्णु पौडेलका लागि फरक कानुन छन्? के दुवैजना यो राष्ट्रका समान नागरिक हुन्?’ कान्तिपुरबाट